Fernando Lillo. Kubvunzana nemunyori weZuva muPompeii | Zvazvino Zvinyorwa
Fernando Lillo chigaro chinomira iye mudzidzisi we mitauro yekare uye munyori wezvakaitika zvemhando mazita akadai se Teucer, mupfura weTroy o Vatasvi vegungwa. Nhoroondo yake yazvino ndeye Zuva muPompeii. Ndinogovana nekuyemura kwako nyika yeGreco-Latin, pachiyero changu chekudzidzira zvekare zvekare kwaisanganisira chiLatin nechiGiriki. Y Ndinotenda nguva yakawanda yakashandiswa iyi hurukuro.
KUKURUKURA NAFERNANDO LILLO
FERNANDO LILLO: Ini handicharangarira bhuku rekutanga chaizvo. Ndakapfuura kubva muunganidzwa unoshamisa wemakomiki Zvishongo zvemabhuku de Bruguera kuchinjika kwe Castilian zvekare muunganidzwa Hombodo itsva dzewaini de Castalia (Verenga Lucanor, Spanish Legends...).
Ini ndinorangarira panzvimbo nyaya yangu yekutanga hombeMapeji 56 andakanyora nesimba rakawanda pandaive nemakore gumi nemana. Yakanga yakanzi Mushonga weYashib uye akarondedzera zviitiko zvevamwe zvisikwa zvidiki zvekufungidzira uyo aigara mukati memwana uye aifanira kumununura kubva pakutukwa nevaroyi vakaipa Yashibhi. Kuverenga kwangu kwese kwehudiki kwaivepo.
FL: Mushure mekunakidzwa ne Nyaya isingaperi naMichael Ende, ndakakatyamadzwa chaizvo Zita rerosi naMberto Eco iyo yandaverenga nayo Makumi mana kana makumi mashanu. Ndichiri kuzviona ndakarara pamubhedha mukamuri rangu ndiri wechidiki mushure mezuva rakaoma kuchikoro chesekondari, ndichinakidzwa nemufaro wekuziva kuti Guillermo naAdso vakapinda sei labyrinth muraibhurari yemamongi, kunzwa kwandisina kumbonzwa kubvira nefirimu kana nhepfenyuro yeterevhizheni. Kunze kwezvose chiLatin ichocho, ipapo ndisingazivikanwe kwandiri, ndinorangarira tsananguro yakanakisa uye inotyisa pamberi pekereke yemamongi ine maungira mazhinji e Apocalipsis.
AL: Munyori anodiwa? Uye kuve mudzidzisi wechiLatin nechiGiriki, ndeupi munyori wekare ave achikwanisa kukufurira iwe semunyori?
FL: Zvangu zvandinoda zvagara zviri Greco-Latin uye Spanish Classics. Semunyori chinzvimbo changu se ChiLatin uye chiGreek mudzidzisi Izvo zvakakonzera zvakanyanya kusarudzwa kwezvidzidzo zvenganonyorwa dzangu. Homer ne Iliad and the Odyssey uye Virgil nekusafa kwake Aeneid, pamwe nematambudziko echiGreek, senge Sophocles, kwaive kufemerwa kweruzivo rwangu rwekutanga, Teucer, mupfura weTroy (Toxosoutos, 2004), uye vaive zvekare kumashure mune rangu rekupedzisira basa rekunyepedzera, Vatasvi vegungwa. Chakavanzika cheCarthage (Evohe, 2018).
Ruzivo rweiye Cordovan muzivi Seneca uye zvinyorwa zvake zvakandikurudzira kunyora yake fungidziro yehupenyu titled Seneca, nzira yevakachenjera (Nhaurirano, 2006).
AL: Uri kutitaurira chii mukati Zuva muPompeii?
FL: Zuva muPompeii Ndicho nyaya yekufungidzira izvo, zvichibva pahupenyu hwevanoverengeka vatambi chaivo vaigara muguta, vanodzosera iyo hupenyu hwezuva nezuva yezuva ripi zvaro mumatsutso egore Kuputika kweVesuvius, the 79 AD C. Muverengi achanyudzwa mu migwagwa ine chipatapata, musangano unofamba, zvivakwa zve mavambo, all matsime anopisa kana kuvanzika kwe dzimba pakati pezvimwe zvinhu zvakawanda.
Chinangwa changu chaive chekuti iwe ugone kurarama Pompeii sezvakataurwa nevagari vayo, nguva dzose ne kushandiswa kwakasimba of the zvinyorwa zvekare kumashure.
AL: Ndeupi hunhu iwe waungadai uchida kusangana nekugadzira?
FL: Pasina kupokana, Ulysses, asi kwete chete iro rinobuda muOdyssey, asiwo iro reIliad uye iro retsika yese yekuMadokero iyo yave ichichinja chimiro chayo uye ichiichinja kuita ngano isingaori.
Iko kusanganiswa kwe shuwa kuenda kumba (kufungidzira kurwadziwa kwekudzoka) pamwe nekukwezva kweiyo ushingi and the kuwanikwa Ndinofunga zvinoshamisa synthesis yemunhu. Uye padivi pake, hongu, vakatendeka Penelope, izvo zvinomumirira mukati menguva yakaoma uye yakatetepa, inenge isina dziviriro, asi yakasimba.
FL: handina zvekunakidzwa nazvo.
FL: Kunyora Ndiri kungoda nzvimbo mu silence uye a tafura yakafara kwaunogona kuendesa iyo mabhuku ekureva uye zvinyorwa.
Kuverenga chero saiti Zvinotaridza kunge zvakakodzera kwandiri, nekuti kana kuverenga kwacho kwakanaka kuchindiparadzanisa nenyika yekunze. Ehe ini ndinosarudza nzvimbo yakanyarara uye kunyangwe kunze kana mamiriro ekunze akanaka.
FL: Ini ndinoda iyo nhetembo and the nhoroondo yedare rondedzero, kunyanya izvo zvinobatanidza erudition neinonakidza kuverenga kuverenga. Iyo theatre Ndinosarudza kuzviona inomiririrwa uye kana iri yechinyakare, hapana chakafanana nekumisikidzwa kwechiGreek theatre (Epidauruskana chiRoma (Merida).
FL: Izvozvi ndiri kuverenga Manzwi emaungira marefu, de Carlos Garcia Gual (Ariel), kukokwa kuti uverenge zvekare. Pashure Zuva muPompeii Ndiri kuzvipa ini pfupi pfupi kubva pakunyora Ini ndinotora iwo mukana kuzvinyora pachangu pane ramangwana zvirongwa pamusoro peGreek-Roman nyika.
FL: Chiratidzo chenguva yedu ndiyo velocity. Tafura dze nhau vanochinja chinenge nguva dzose uye senge bidha yemabhuku akadhindwa ndizvo yakafara vazhinji mabasa mhando inogona enda usingaonekwe kune veruzhinji. Dzimwe nguva vanobheja pakubudirira kwechinguvana kwemazita anokurumidza kukanganwika. Zvisinei, ndinovimba izvozvo mabasa anokosha acharamba aripo munguva, kunyange vachitora nguva kuti vazivikanwe.
FL: Nguva dzedambudziko dzatinoisa mettle kumuedzo dzinogara dziri mikana yekudyara wega uye pamwe chete. Isu takanga tajaira kutenda kuti sainzi uye tekinoroji zvinogona kutonga hupenyu hwedu. Tiri kugamuchira kuzvininipisa kurapa. Iwo zvakare mukana wekuvhurira kuna Mwari uye kudarika uye kukoshesa izvo chaizvo zvakakosha zvinhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Fernando Lillo. Kubvunzana nemunyori weZuva muPompeii